Abavelisi abaMnyama beMagicalTex kunye nababoneleli - China Umzimveliso weMagicalTex mveliso
China Umthengisi weRoller Blind Fabric ethengiswayo
IMagicalTex yangaphakathi yeefestile eziziMnyama Ilaphu leOfisi ikumgangatho olungileyo. Kuzinzile, akukho mngundo kwaye akukho nundu. Yamkelwa ngamalaphu anobungane kwindalo esingqongileyo, ayityhefu kwaye ayinambitheki eyenza imeko entle kuwe. Ifanelekile iFrench Window. Sineentlobo ezininzi zemibala yamandulo ngokhetho lwakho. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka. Amalaphu zethu manzi kunye nokuthintela umlilo.
Umgangatho ophezulu weMagicalTex yeGunny Blind Fabric Blackout ithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Sinezinto ezikhuphisanayo. Ngenjongo ephezulu kunye nokusebenza okuphezulu, sinikezela ngokukhawuleza kuwe. Kwaye kulula ukuba uyifake. Unokuba neendlela ezahlukeneyo zokufaka, ezinje ngokuFakwa kweSiling, ukufakelwa kwangaphandle, ukufakwa ecaleni kunye nokunye. Sinokukunika iisampulu zasimahla zokujonga umgangatho kunye nombala.
IsiTshayina soMthengisi seRoller Blinds Fabric Blackout
IMagicalTex Blackout Roller Blind Fabric yenye yezona mveliso zethu zaziwayo phakathi kwabathengi bethu. Kukuthintela amanzi kunye nomlilo. Izinto ezisemgangathweni zepolyester ezinokuyenza ibe yomelele, kungabikho mngundo, kungabikho nundu, kungabikho deformation, akukho mkhondo emva kokusetyenziswa kwexesha elide. Into nganye inembonakalo entle, intle, inesisa kwaye iyabukeka. Unokuba neendlela ezahlukeneyo zokufaka, ezinje ngokuFakwa kweSiling, ukufakelwa kwangaphandle, ukufakwa ecaleni kunye nokunye. Kulula ukuba uyifake.
Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya. Amandla aphezulu e-polyester enza amalaphu ethu 'amandla aphindwe kabini kunenylon kunye namaxesha angama-20 aphezulu kune-viscose; Ukuqina okufanelekileyo kwenza iimveliso zethu ziqine, zomelele, zibe nemibimbi. Kwaye, ilaphu lethu le-polyester linobushushu obuphezulu kunye nokugquma kobushushu. Sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe!
Umzi mveliso oQokelelweyo weRoller Blind Fabric Blackout
I-MagicalTex Roller Blind Fabric yenziwe nge-polyester, sineentlobo ngeentlobo zamalaphu onokukhetha kuwo. Iimveliso zethu kufanelekile kwiimarike ezahlukeneyo. Zonke iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kwaye zinokukunceda uzuze iintliziyo zabathengi bakho. Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya.
Sineziko lobungcali le-R & D ukuyila iimveliso ezintsha. Iimveliso zethu zizalisekile unokufumana iimveliso zakho ezifanelekileyo kwikhathalogu yethu. Ngeentlobo ezininzi, izimbo zenoveli, iindlela ezithandwayo, iindlela ezahlukeneyo. Singumenzi, sithengisa iimpahla kubathengi bethu ngokuthe ngqo, inokukunceda ngokushiya inkcitho ephakathi. Siyakholelwa ukuba singangumthengisi wakho olungileyo. Sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe!
Roller Shutter Blackout Ilaphu edume 320g
Ingubo yeMagicalTex Roller Shutter Blackout ilaphu yenziwe nge-polyester enomgangatho okhuphisana kakhulu. Yinto entle nefashoni. Ngendlela yokutyabeka ubuso ngobuso, iimveliso zethu zimnyama. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Zonke iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo.
Iimfama zethu zingxolo ephantsi, zingenza ukuba ikhaya lakho kunye neofisi kuthule ngakumbi, kubonelele ngendawo ethe cwaka kuwe. Sine-MOQ encinci, sinesitokhwe uninzi lweemveliso zethu, sinokucwangcisa ukuthunyelwa kuwe kungekudala. Ukubonisa iintliziyo zethu kuwe, sinokukunika iisampulu zasimahla kuwe zokujonga umgangatho kunye nombala.
Ilanga elisithelisayo leLinen Fabrics ekumnyama iPolyester
Ingubo yeMagicalTex Blackout yenziwe nge-polyester, kwaye yenye yeemveliso zethu ezithandwayo. Sinokubonelela ngo-200/230/250/300 ububanzi obuhlukeneyo onokukhetha kubo. Ubunzima belaphu lethu li-310gsm ngemitha nganye, kwaye sinokwenza ububanzi obulungelelanisiweyo. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Sinemibala eyahlukeneyo yokhetho lwakho, unokukhetha nayiphi na. Yinto efanelekileyo kakhulu esikolweni, ekhaya naseofisini.
Iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo. Zomelele kakhulu, ubomi bazo bunokuba yiminyaka eli-10. Sine-MOQ ephantsi kuwe. Ke, nokuba ubungakanani bakho bukhulu okanye bincinci, sinokwenza ishishini kunye nawe Ngomgangatho olungileyo kunye nenkonzo elungileyo, sithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Sinikezela ngenkonzo yeeyure ezingama-24 kubathengi bethu ukukuxhasa. Kwaye ngentsebenziswano yethu yokuqala, sinokunikela ngeesampuli zasimahla kuwe.
IMagicalTex Window Curtain Fabric 100% Ipholiyesta yenziwa ngeplastiki. Ukutyabeka ngombala wegwebu kwenza ukuba kungabikho kuphela kombane omnyama, kodwa ikwanenkangeleko entle. Sinemibala eyahlukeneyo kunye nobubanzi obahlukeneyo kukhetho lwakho. Kwaye singenza ishishini le-OEM. Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile. Kwaye inesakhono esihle ekufiphiseni kwaye inefuthe lokungenisa umoya.
Iimveliso zethu zithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu. Sinikezela iwaranti yeminyaka eli-10 kuwo onke amalaphu ethu. Sine-MOQ encinci, ukuba iodolo yakho inkulu, siya kukucwangcisela imveliso, kwaye ukuba iodolo yakho incinci, ungakhathazeki, sinesitokhwe esiqhelekileyo sokuthengisa izinto ezishushu. Sinokukunika iisampulu zasimahla zokujonga umgangatho kunye nombala.
Iziciko ze Window shutter Blackout Ilaphu 100
Ilaphu leMagicalTex Blackout Roller Blinds liyenziwe ngeplastester. Yinto entle nefashoni. Ngendlela yokutyabeka ubuso ngobuso, iimveliso zethu zimnyama. Ngobuchwephesha bokusika obuphambili be-ultrasonic, ayenzi ukuba iburr emaphethelweni, intle kakhulu. Zonke iimveliso zethu zikumgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo. Ilaphu lethu linobungqina beoyile kwaye alinamanzi, kulula ukuba licoceke, lome xa sele ucolile.
Sinamava angaphezu kweminyaka eli-16 kumalaphu angaboniyo kunye neemveliso zentengiso kumazwe angaphezu kwama-200. Singumenzi, sithengisa iimpahla kubathengi bethu ngokuthe ngqo, inokukunceda ngokushiya inkcitho ephakathi. Injongo yethu kukwenza ubomi bakho bube ngcono. Ngomgangatho olungileyo kunye neqela lenkonzo ebalaseleyo, sithandwa kakhulu phakathi kwabathengi bethu.